मधेश झरेपछि उपेन्द्रको माग : तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रिया बढाउनुपर्छ
लहान, ११ कात्तिक । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । सिरहा नगरपालिका–१९ सन्हैठामा आज स्वास्थ्यचौकीको उद्घाटन तथा
हाई–प्रोफाईल २५ जुवाडेको भाईटिका जेलमै
काठमाडौं, ११ कात्तिक । काठमाडौंको महाराजगञ्जबाट आइतबार २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नगदसहित पक्राउ परेका २५ जना जुवाडेको यो वर्षको भाईटिका प्रहरी हिरासतमै बित्ने भएको छ । उनीहरुलाई हिरातमा राख्ने/नराख्ने
बग्दाद, ११ कात्तिक । इराकमा भइरहेको सरकार विरोधी पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ७४ पुगेको छ । अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा परी अरु ३६ सय
बाबुराम सपरिवार मर्निङ वाकमा निस्किएपछि (फोटोफिचर)
काठमाडौं, १० कात्तिक । सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सपरिवार मर्निङ वाकमा निस्किएका छन् । उनीसहित पत्नी हिसिला यमी र छोरी
आइजीपी खनाल आक्रामक रणनीतिमा, हाइप्रोफाइल समातिने क्रम बढ्ने
काठमाडौं, १० कात्तिक । नेपाल प्रहरीका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले जीवनकै ठूलो चुनौती मोलेका छन् । आफूमाथि चौतर्फी दबाब र चेतावनी पर्ने सूचना पाउनुका बाबजुद दशकौं देखि थाती रहेका आपराधिक घटनाहरुको
ठूला पाँच मिठाई पसल कारवाहीमा
काठमाडौं, कात्तिक १० । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित पाँच वटा मिठाई पसल कारवाहीमा परेका छन् । मिठाईजन्य खाद्यवस्तु दूषित तथा कम गुणस्तरका पाइएपछि उनीहरूलाई महानगरको कृषि तथा पशु सेवा विभागको
काठमाडौं, कात्तिक १० ।अजरबैजान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार बाकुस्थिति अतेस्गाह मन्दिरको अवलोकन गरे । सत्रौँ र अठारौँ शताब्दीमा बनेको र हिन्दू, शिख तथा जोरोअस्ट्रियनले पूजा गर्ने पाँचकुने यस
अध्यक्ष नहुँदा आयोग अलपत्र
काठमाडौं, कात्तिक १० । मुलुकमा सशस्त्र द्धन्द्धका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका दुई आयोग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन अयोग सात महिनादेखि अलपत्र
काठमाडौं, ९ कात्तिक । नेपालको पहिलो मौलिक सिङगिङ रियालिटी शो आई.एम.ई. नेपाल लोकस्टारका विजेता शनि विश्वकर्माले आफूलाई विजयी बनाउन साथ र सहयोग पुर्याउने भोटर्स, शुभचिन्तक तथा आफन्तहरुलाई धन्यवाद दिएका छन्
काठमाडौं, ९ कात्तिक । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेल बस्ने या धरौटीमा रिहा हुने टुंगो आउँदो हप्ता लाग्नेछ । १९ असोजमा पक्राउ परेका उनीमाथि २५ दिनको अनुसन्धान समयावधि आउँदो हप्ता
तिहार मनाउन उपराष्ट्रपति पुन रोल्पाको पुख्यौली घरमा
काठमाडौं, ९ कात्तिक । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफ्नो पुख्यौली घर गएका छन् । परिवर्तन गाउँपालिका–२ रांसीको डाँडागाउँमा जन्मघर भएका पुन तिहार मनाउन पुगेका छन् । पहिलो कार्यकाल उपराष्ट्रपति भएका बेला
रहिनन् पूर्वसभासद कमला सुवेदी
काठमाडौं, कात्तिक ९ । लामो समयदेखि ब्रेन ट्युमरको समस्याबाट पीडित पूर्वसभासद कमला सुवेदीको निधन भएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेकी सुवेदीको ५० वर्षको उमेरमा निधन भएको